Akhriso: Qaabkii loo dilay Madaxweynihii hore ee Yemen, Cali Cabdallah Saalax - BAARGAAL.NET
Ali abdalah salah Cali Cabdallah Saalax yaman
Akhriso: Qaabkii loo dilay Madaxweynihii hore ee Yemen, Cali Cabdallah Saalax
Cali Cabdallah Saalax oo muddo 33 sano ah kasoo talinayey dalka Yemen ayaa maanta lagu dilay duleedka koonfureed ee magaalada caasimada ah ee Sanca, xili uu isaga baxay gurigiisa oo ay ku hareeraysnaayeen maleeshiyaadka Xuuthiyiinta.
Saalax ayaa Sabtidii ku dhawaaqay inuu isaga baxay isbaheysigii uu la lahaa kooxda Xuuthiyiinta oo sanadkii 2015 la wareegay guud ahaan maamulka caasimada Sanca. Qabsashada Sanca ee Xuuthiyiinta ayaa waxaa xiligaasi u sahlay Cali Cabdallah Saalax oo isagu kasoo jeeda deegaankaasi xili uu mucaarid ku ahaa Xukuumada Cabdulrabi Mansuur Hadi.
Saaka oo Isniin ah ayaa madfac lagu dhuftay guriga uu degenaa Cali Cabdallah Saalax, waxaana xooga yar kadib halkaasi isaga baxay kolonyo gawaari ah oo wada Cali Cabdallah Saalax iyo xubno isaga ku dhaw oo uu kamid yahay Yasser al-Awadi oo ahaa Xoghayihii xisbiga Saalax ee GPC, ninkaasi oo isagana la dilay.
Dilka Cali Cabdallah Saalax ayaa laga cabsi qabaa inuu waji cusub uu yeelo dagaalka maadaama uu kasoo jeedo mid kamid ah qabaa’ilka ugu hubka badan dalka Yemen isla markaana uu ku lahaa taageero xoogleh.
Cali Cabdallah Saalax ayaa mar walba oron jiray intuu xilka hayey “…Xukunka iyo Siyaasada Yemen waxay lamid tahay adoo ku dul ciyaaray Madaxyada Abeesooyinka…”
Ali abdalah salah|Cali Cabdallah Saalax|yaman|